Veloma amin'ny olan'ny bateria Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Veloma amin'ny olan'ny bateria Apple Watch
Tranonkala an'arivony maro amin'ny Internet no miomana hitantara ilay hetsika fa rahampitso, amin'ny 18:XNUMX hariva any Espana, dia afaka manaraka isika avy any Mac avy any Mac aho. Hifantoka amin'ny fitaovana vaovao an'i Apple, Apple Watch ity hetsika ity. Hatramin'ny nanolorana azy tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, ny fitsikerana voalohany dia natao tany amin'ny bateria.
Raha misy zavatra iray nanodidina ny tontolon'ny finday Apple dia io foana no bateria. Raha MacBooks no solosaina fitantanana bateria tsara indrindra eny an-tsena, tsy afaka mirehareha toy izany koa ny iPhones. Ankehitriny rehefa tonga ny Apple Watch, ity teboka ity no voalohany nomen'ny mpitsikera lanja. Noho io antony io dia misy ny foto-kevitra fanampiny toy ilay iray Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay fa hanampy ny Apple watch hanana fizakantena lehibe kokoa izy ireo.
Ora vitsy taorian'ny nanombohan'ny Apple Watch dia tsy mijanona ny fivoahan'ny endri-javatra, ny ankamaroan'izy ireo dia nifantoka tamin'ny olan'ny bateria. Na izany aza, ny iray amin'ireo zavatra voalohany fantatra dia ny tsy maintsy hamerenana azy isan'andro, taty aoriana dia fantatra fa avy amin'ny Cupertino Namorona fomba iray hiasa amin'ny famantaranandro izy ireo rehefa ambany ny bateria dia mampiseho ny fotoana fotsiny izy io ary tsy maty tanteraka.
Aorian'izay dia fantatra fa ho tonga ny ora famaranana famenoana ny fitaovana afaka adiny roa, mba hahafahanao mameno azy io amin'ny andro iray ihany raha ilaina imbetsaka. Na izany aza, tsy faly tamin'ity fizakantena ity no niseho mpanamboatra izay namorona fehin-kibo izay hanome fahaleovan-tena bebe kokoa amin'ny famantaranandro Apple vaovao.
Amin'izao fotoana izao dia foto-kevitra izy io ary mbola ao anatin'ny dingana patanty sy famolavolana, saingy azo antoka fa hahita vokatra. Tady iray izay Samy nampidirina ireo bateria miovaova izay mamela ny fahaleovantenan'ny fiambenana hitarina hatramin'ny avo telo heny.
Ilay fatorana resahina dia miantso azy ihany Reserve Strap ary efa azo amandrikaina ao amin'ny tranonkalan'ny mpanamboatra azy io ho toy ny pre-order, eny, amin'ny vidiny $ 249. Ny tena marina dia somary lafo ihany izany raha ny maodely Sport an'ny Apple Watch dia manodidina ny 345 dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Veloma amin'ny olan'ny bateria Apple Watch
Apple dia manolotra MacBook misy refy mahavariana sy fampisehoana Retina 12 "
Ny antsipiriany vaovao amin'ny Apple Watch dia voasivana miaraka amin'ny fahagagana hafahafa